पोखराको लेकसाईड–‘बोत्तल हानाहान, केटी तानातान’ - Dna Nepal
२६ श्रावण २०७६, आईतवार ०३:३०
‘रातभर सुत्न सकिँदैन । एक निमेस निँदाउन खोज्यो, हरेक रात कोलाहल छ । बोत्तल हानाहान र केटी तानतान हुन्छ,’ लेकसाइडवासी महिलाउद्यमी पम्फा पहारीले आक्रोश पोखिन्, ‘यस्तो कहिलेसम्म ? चैनसँग सुत्न कहिले पाइन्छ ?’
पोखरा नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र हो । पोखराको पनि लेकसाइड पर्यटकीय केन्द्र मानिन्छ । तर यहाँ सञ्चालित डिस्कोथेक, डान्सबार र पवका कारण पछिल्लो समय वातावरण अराजक बन्दै गएकोमा लेकसाइडवासीको गुनासो बरोबर सुनिने गर्दछ ।
फेवाताल किनारमा शनिवार आयोजित एक कार्यक्रममा पहारीले अहिलेको युवापुस्ता बिग्रिँदै गएकोमा गुनासो समेत गर्दै शुक्रवार रातिकै यथार्थ घटना पस्कदै थिइन् ।
‘अरु दिनभन्दा शुक्रवार अझ सम्हालिनसक्नु हुन्छ, युवाजमात रक्सीले मात्तिएको हुन्छ’ उनले अगाडि भनिन्, ‘म गएराति २ बजेतिर त्यस्तै खालको भिडियो समेत खिचेकी छु । ३ बजे आएर सुत्न खोजें सकिनँ । मनमा कुरा खेलिरह्यो । ४ बजे निँदाएर २ घण्टापछि ६ बजे घरको कामले उठ्न परिहाल्यो । यसरी दैनिकजसो मात्र २ घण्टा सुतेर कसरी दिनभरको काम गर्न सकिन्छ ? हाम्रो शान्तिसुरक्षा खै ?’
लेकसाइडलाई चौबीसै घण्टा खेल्ने विषयमा यतिखेर बहस जारी छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले लेकसाइडलाई चौबीसै घण्टा खोल्नका लागि निर्देशिका बनाएर केन्द्रमा पठाइसकेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा शहीदचोकदेखि हल्लनचोकहुँदै जिरो किमीसम्मको क्षेत्रलाई चौबीसै घण्टा खोल्ने गरी निर्देशिका तयार गरिएको हो । कास्कीका प्रजिअ चक्रबहादुर बुढाले निर्देशिका केन्द्रमा पठाइएको भन्दै निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि सो अनुरुप सबैले पालना गर्नुपर्छ, पालना गर्दिनँ भन्न नपाइने बताए ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्व अध्यक्ष सोमबहादुर थापा पनि व्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदै परिस्कृत गरेर पर्यटनमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘९ बजे अरु ब्यापार बन्द गरेर होटल मात्रै खोल्न पाउनुपर्छ भन्नु राम्रो हैन । सबैले ब्यापार गरेर खान पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै ब्यापार चल्यो भनेमात्रै चहलपहल बढ्छ । पर्यटकले बढी खर्च गर्छन् ।’
आजको आदर्श समाज दैनिकमा यो समाचार छापिएको छ ।